“Gobolkeenu diinta wixi fusuq ku keenaya wuu la dagalmayaa” Maayarka Burco
Home WARARKA “Gobolkeenu diinta wixi fusuq ku keenaya wuu la dagalmayaa” Maayarka Burco
Burco-(Berberanews)-Mulkiilaha hotelka Isha-Burco ee magaalada Burco Jamac Maxamuud Adan (Jaamac Karaaciin), ayaa kasoo horjeestay go’aan uu maamulka gobolka Togdheer kaga joojiyay hotelkiisa heesaha cawayska.
Hotelka Isha-Burco, oo ah hotel cusub oo dhawaan laga furay magaalada Burco ayaa kadib markii lafuray, waxa lagu bilaabay in habeenkii laga tumo heeso si macaamiisha loo mada daaliyo, taasi oo aan muddo looga baran hotelada Burco.
Hadaba maamulka gobolka ayaa maanta sheegay in aan heeso danbe laga tumi doonin hotelka.
“Gobolkeenu diinta wixi fusuq ku keenaya wuu la dagalmayaa, inagoo xanuuno la tiicayna dhan ka kalena ka tuman mayno, hadii hotelkasi uu joojin waayo ruqsada lagala noqonaya” waxa sida yidhi badhasabka gobolka Togdheer, Maxmed Diiriye Xayd.
“Dadka meheradaha lihi haday xishoon wayaan, walahi, bilaahi, tolaahi gacan baanu wax kaga qabanaynaa” waxa sida yidhi maayarka Burco, Maxamed Yusuf Muraad.
Hadaba mulkiilaha hotelka Isha-Burco ayaa mayarka magaalada Burco ku eedeeyay in uu cuna qabatayn ku hayo magaalada Burco.
“Dad badan baa magaalada ugatagay cuna qabataynta uu ku hayo, oo ama Hargaysa yimid ama dibada qabtay” ayuu yidhi Jaamac Karaaciin.
“Maantu waxay daliil u tahay 7 da sano ee uu haystay in uu dhibaato kale kaga sii tago” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Jaamac Maxamuud.
Mulkiilaha hotelka ayaa sheegay in uu u hiilinayo reer Burco isla markaan mayarka magaaladu uu doonayo in uu magaalada baabiiyo.
“Shacabku way ogyihiin Burco ninka u lisaya iyo ka kamaalaya, anaga waxa naga go’an in aanu magaalada u hiilino, horumarkeedana ka shaqayno”. Ayuu yidhi Jaamac Karaaciin.
Mulkiilaha hotelka Isha-Burco Jamac Karaaciin ayaa hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay in Burco ama Somaliland la xeer noqon doonto ama ay dawlad kale noqon doonto.
maayarka burco hotelka isha togdheer
Previous article“Waxaan qabaa in wadahadalku dhalin karo in dalalku kala go-aan” Cirro
Next articleTrends Analysis of agrometeorology In Somaliland Part (2)